QABSOO MIRGAAFI DHALOOTA QUBEE – Beekan Guluma Erena
QABSOO MIRGAAFI DHALOOTA QUBEE	Beekan Guluma Erena
Poems, Seenaa, Uncategorized April 10, 2016April 10, 2016QABSOOFI DARGAGGOO	2 Comments
8SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
QabsooMirgaafi Dhaloota Qubee
Qabsoon mirga dimokraasii fi bilisummaaf taasifamu amma garboonfataan jiruti yeroo kamuu kan wal irraa citu miti. Oromiyaan, galata gootota ilmaan Oromoo kaleessa haarsaa gootummaa kaffanaliif haata’utii, yeroo ammaa dhaloota qubeen finiinee garboonfataa raasaa jira. dhalooti qunee hooggansaa fi toftaa qabsoo mataa isaa maddisiisuu danda’ee jira. kun injifannoo guddaadha. Wayyaaneen qabsoo Oromoo mana hidhaa ykn dallaa keessatti daangessuuf jecha, biyya ollaa Itiyoophiyaa fi Oromiyaa jiran hunda, kaan humnaan, kaan ammoo qabeenyuma Oromiyaaittin bituudhaan qabsoo Oromoo duubbee dhabsiisuuf waggaa 24ffan darban hojachaa ture.
Duubbee qabsoo Oromiyaa daangessuuf jecha Jibiitii, Somaliyaa, Kenyaa fi Sudaan irratti maqaa misooma jedhuu fi humnaan sodaachisuun biyyootiin kun deeggarsa qabsoo Oromoo irraa akka of qusatan taasisuu yaalee jira. Wayyaaneen kan hubachuu dadhabe, qabsoon bilisummaa fi mirga dimokraasiif taasifamu amma cunqursaan jirutti kan hin daangeffamne tahuu wallaaluu isaa ti. Dhugaadha, toftaan qabsoo torbaatamoota keessa taasifamaa turan, kan Wayyaanees dabalatee deeggarsa duubbee alagaa irratti kan hirkatu ture. kun haala siyaasa addunyaa yeroo sanaa kan ilaaluu dha. haalli addunyaa yeroo ammaa keessa jirru jijjiramus toftaa qabsootu jijjirama malee ilmi namaa garbummaa baatee jiraachuu tasa hin danda’u. guddinni qabsoo Oromoo fi ilmaan cunqurfamaa biyya Empaayera Itiyoophiyaas kanuma muldhisa.
Dhalooti qubee yeroo ammaa qabsoo roga hundaan Oromiyaa keessatti finiinsaa jirus qabsoo Oromoo daangessuun kan hin danda’amne tahuu ifatti muldhisee jira. dirreen qabsoo Oromiyaa bobaa diinaa keessatti. Duubbeen qabsoo Oromoo Oromiyaa fi Oromiyaa keessatti. Golli diinaa (Wayyaanee) hundi dirree qabsoo ti. Tokkummaan keenya humna qabsoo keenyaa ti.
Dhalooti qubee hooggansaa fi ajaja biyya fagootii eeggatu ykn abdatu tasa jiraachuu hin qabu. Wayyaaneen sochii qabsoo dargaggoon dirree Oromiyaa keessatti finiinsaa jiran dhaabbilee siyaasaa tokko tokko wajjin wal qabsiisuu yaaluun isaa ta’e jedhee ilaalcha ummataa gara dabarsuufi. Qabsoo kan gaggeessaa, hoogganaa, toftaa isaaf malu maddisiisaa jiru, dhaloota qubee bobaa diinaa keessa ta’anii jiranii dha. sochiin dargaggoo Oromiyaa qabsoo fi hooggansa qabsoo ofitti fudhatanii jiru. kanaaf falli Wayyaaneen qabu, akka kana duraa mooksaa fi gowwoomsaa gara garaatti dhimma bahuun kan yeroon irra darbee dha.
Dhalooti qubee qabsoo finiinsaa jirtan, yeroo kamuu caala qabsoo ofirratti hirkannoo gaggeessaa jiraachuu keessan jala muruu qabdu. Hooggansa mataa keessanii fi toftaa qabsoo haala naannoo keessa jirtaniif malu ofii keessanii maddisiisuun injifannoo bilisummaa Oromiyaaf wabii dha.
Dhaabbileen siyaasaa karaa nagaas ta’ee karaa hidhannoo qabsooti jiran, qoodi isaanii tahuu kan qabu, dhaloota qubee aangessuu fi deeggarsa isaaniif malu gochuun ala bifa kamiinuu sochii qabsoo ofirratti hirkannoo dhaloota qubee dhimma xixiqaaf oolfachuu yaaluun barbaachisaa miti. Keessumaa dhimma hooggansaa guyyaa guyyaa keessa galuun sochii qabsoo dargaggoon finiinsaa jirtu kana hooggansa dhabsiisa.
Kanaaf jecha dhaabbileen siyaasa Oromoo gahee deeggarsaa irra kan darbe sochii qabsoo dhaloota qubee keessa harka naqachuun barbaachisaa hin tahu.
Dhaamsa dhaloota qubee qabsoo finiinsaa jirtaniif
Wayyaanee akka aangoorra turu kan taasisan isaan ijoo keessaa kana ta’uu beektanii qabsoo karaa nagaa taasifamaa jiru hidhata kana diiguuf xiyyeefannaa kennuu dha.
• Caasaa mootummaa gubbaa kaasee amma gandaatti jiran
• Humna nageenyaa
• Madda galii dinagdee walitti qabu
• Olola fakkeessii fi abdiin jiraachisuu
• Toftaa ykn mala qoqodanii bituu
• Humnoota biyya alaa gargaarsa dippilomaasii fi maalaqaa kennaniin
Guduunfaa wayannee aangorra jiraachisaa jiru kana diiguuf humna qabnu sirnaan dhimma itti bahuu qabna. Akka sabaatti nuti biyya sana keessatti sabni kamuu kan hin qabnee fi gara fuunduraattis qabaachuu kan hin dandeenye humna sadii qabna.
• Humna dinagdee
• Humna namaa
• Humna taa’umsa lafaa (geo-location)
Humni sadan kun hooggansa isaaf maluu fi ijaarsa humna kana gara qabsoo bilisummaatti geeddaruu danda’u qabaannaan diinni keenya guyyaa tokkoof nurra hin bulu. Kanaaf kennaa Oromiyaa sadan kana gara humnaatti jijjiruuf toftaa isaaf malu baafachuun eddu murteessaa dha. Wayyaaneen kan Oromiyaa bitaa jiru humna keenya sadan kana qoqoduudhaan tahuu beekuu qabna. Kennaa Oromiyaa sadan kana gara humnaatti jijjirraan Wayyaanee marfama keessa galchina. Dhuma irratti andhuura keenya irraa buqqisuudhaan mirga dimokraasii fi bilisummaa keenya labsanna.
Qabsoo yeroo ammaa dhalooti qubee finiinsaa jiru akka galma gahaniif, gaheen ilmaan Oromoo biyya keessa jiranis ta’ee biyya alaa, akkasuma dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokkummaan dhaabbachuun dhaloota qabsoo bilisummaa ofitti fuudhe cinaa dhaabbachuu qabna. Aadaa garaagarummaa mooraa qabsoo Oromoo keessatti amma yoonaa itti jiramu alduree tokko malee hiikkachuun yeroon isaa ammaa dha.
Dargaggoonni Oromoo qabsoo finiinsaa jirtan of eeggannoo guddaa gochuu kan qabdan walitti bu’iinsa shira diinaan uumamuu malan irraa of eeggachuu dha. keessumaa sochii yeroo ammaa finiinaa jiru gara dabarsuuf Wayyaaneen karaa ergamtoota isaatiin ummata Oromoo fi sab-lammii biraa wal dura dhaabuun isaa waanta hin oolleedha. Kanaaf jecha sochiin dargaggoota keenyaa kun saba cunqurfamaa biyya sana keessa jiran hundaaf wabii tahuu isaa gochaan muldhachuu qaba.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa8SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GEERARSA OROMOO
WAAQAA SITTI IYYANNA!! →
2 thoughts on “QABSOO MIRGAAFI DHALOOTA QUBEE”	abdii oromiyaa gadaaApril 12, 2016 at 11:04 amPermalink	hedduu yaada gaariidha. hora nuuf bula. akkaasii gumaachi beeka
Reply	abdii oromiyaa gadaaApril 12, 2016 at 11:04 amPermalink	hedduu yaada gaariidha. hora nuuf bula. akkaasii gumaachi beeka